Izindaba - Ngabe umshini we-1060nm Diode Laser Slimming Machine uyindlela engcono ehlukile yamafutha anenkani eBelly, Izibambo Zothando Namanye Amafutha Omzimba?
Uma uzame kanzima ukuqeda amanoni esiswini anenkani, izibambo zothando nezinye izinhlobo zamafutha omzimba, ngokungangabazeki unake izikhangiso eziningi zethelevishini zeCoolSculpting. Lezi zikhangiso ziqokomisa le ndlela yokwelashwa engavumelekile yokususa amafutha asala ngemuva kokudla nokuvivinya umzimba akusizile wehlise isisindo. Ngemuva kweminyaka eminingi ngilapha iziguli futhi ngenza izinqubo zezimonyo eziyizinkulungwane, ngifinyelele esiphethweni sokuthi ukwelashwa okuhlukile okungavumelekile kuyindlela engcono kuneziguli eziningi. Lokho kwelashwa kungumshini oshisayo wamafutha we-1060nm diode laser.
Esikhundleni sokusebenzisa amakhaza, umshini wokunciphisa i-diode laser we-1060nm usebenzisa ukushisa okuvela kuma-lasers ukubulala amangqamuzana amafutha. Inenqubo efanayo ejwayelekile — amangqamuzana anamafutha ayakhonjwa, abulawe, futhi akhishwe kancane umzimba. Ngokuhamba kwezinyanga ezimbalwa ngemuva kokwelashwa kwakho, uzobona ukwehliswa kwamafutha endaweni ebhekiswe kuyo.
Umshini we-1060nm diode laser slimming ulungele abantu abanezindawo ezincane zamafutha anenkani kepha kungenjalo basesimweni esihle somzimba. Imiphumela futhi ihlala unomphela inqobo nje uma isiguli sigcina isisindo saso nempilo yomzimba.
Ukuma kwedivayisi kwenza kube nzima ukuyisebenzisa ezingxenyeni zomzimba ezigobile, ngakho-ke kunqunyelwe kancane kunezinye izinketho. Ezinye iziguli zibika ukuzwa ukushisa okuncane ngenxa yokushisa, noma ngabe idivayisi iyaphola ngesikhathi sokwelashwa.
Ngomshini wokunciphisa i-diode laser we-1060nm, akukho ukuncela noma ukudonsa kwezicubu. Idivayisi ilele phansi ngaphezulu kwendawo ofuna ukuncipha kuyo. Amandla e-Laser angena ezicutshini futhi abangele ukulimala okushisayo kumaseli amafutha. Ziyafa ngokuhlelwa kwamaseli, futhi amasosha akho omzimba azowasusa.
Umshini we-1060nm diode laser slimming ungcono kakhulu
Uma ungumuntu omatasa (kulezi zinsuku, ngubani ongekho?) Ukwelapha izindawo ezimbili ngemizuzu engama-25 ngomshini we-1060nm diode laser slimming yisikhathi esikhulu sokulondoloza isikhathi esichitha ihora ngesigaba ngasinye nge-cryolipolysis. Futhi njengoba kungekho isikhathi sokuphumula esinomshini wokunciphisa i-diode laser we-1060nm, ungathola ukwelashwa bese ubuyela emuva empilweni yakho ematasa.